MobileAppTracking: Ihe SDK maka Mobile Wụnye | Martech Zone
Ekwentị mkpanaaka awade ihe SDK (Android ma ọ bụ iOS) na-adị mfe iwekota akuko na ihe ọ bụla ad netwọk ma ọ bụ na-ebipụta ibe na gị mmepe kpuchie. Ozugbo SDK gbakwunyere, ị nwere ike ịmegharị ihe omume sitere n'aka onye ọ bụla ọzọ. MobileAppTracking anaghị adabere na UDID dị ka usoro njirimara - ha na-akwado ọtụtụ ụzọ aha njirimara ndị kwekọrọ na iwu ụlọ ahịa ngwa.
Sochie mobile ngwa installs na onye ọrụ njikọ aka azụ gị mobile mgbasa ozi mkpọsa.
Ekwentị mkpanaaka nwere ike inye gị ntinye na data ntụgharị na ezigbo oge, na-enyere gị aka ịkwalite ọwa ahịa gị gafere mmekọrịta mgbasa ozi gị. Dekọọ ahịa, na nzụta ngwa, ndebanye aha, mmezu ọkwa, na data ndị ọzọ maka ịchọpụta uru ndụ (LTV) na njigide ndị ọrụ. Pụrụ ọbụna soro gafee ngwa ọdịnala na otu mobile ngwaọrụ!
Olee otu MobileAppTracking si aru oru
Njikọ Ndepụta - Nweta njikọ pụrụ iche maka isi ahịa ọ bụla.
Mgbasa ozi ekwentị - adachara ad ma mata onye o mara ngwaọrụ mkpịsị aka.
Ahịa Ahịa - onye ọrụ na-etinye ngwa gị.
Egwuregwu - onye ọrụ mepee ngwa ahụ na SDK na-achọpụta isi mmalite site na mkpisiaka aka.
Mobile App Ndepụta bụ a na-abụghị ele mmadụ anya n'ihu nsuso n'elu ikpo okwu na-enye ezigbo oge nsuso na akuko maka mobile ngwa mgbasa ozi. Sochie otutu netwok mgbasa ozi, ndi nkwusa, na ndi ozo site na ijikọta otu SDK. Mobile App Ndepụta bụ gị ná mma ikpo okwu maka niile mobile mgbasa ozi mkpọsa.
Nwere ike sorochi ihe ruru iri puku ise na - akwụghị ụgwọ kwa ọnwa iji bido ma kwụọ ụgwọ $ 50,000 kwa nke a mechara. A na-enye ọnụahịa ego maka nnukwu nkesa ekwentị gafere 0.002 nde ma ọ bụ karịa.
Tags: Attributionnjikọ ad netwọklvvmobile ad netwọkmobile ad nkwusamobile ngwa nyochamobile ngwa njirimarangwa mkpanaaka sdkmobile wụnye njirimaramkpesa mkpanakamkpesa mkpanaka sdkonye ọrụ ekwentị ltvsdk
M na-eche nke Marketing Marketing SDK a kapịrị ọnụ ga-adị mkpa ịbanye n'ime egwuregwu ahụ tupu Launch Soft. Biko biko kọwaa ihe omume egwuregwu SDK ga-egwu.